Ukungabekezelelani ngokwenkolo nobunikazi bamasiko - I-Afrikhepri Fondation
Ukungabekezelelani kwezenkolo kanye nokwaziswa kwamasiko
Kulo mbhalo ovela ku-16 mail 2009, Ababhali, uYao N'Guetta noTraoré Adama, baxwayisa umphakathi ngokucekelwa phansi kwamasiko ase-Afrika ngu imibono abantu bezinye izizwe abahambisa ngokuthula emthunzini wokuguqula abantu ngenkolo. Ukuhlukahluka ngokwenkolo nangokwenkolo kuyisici somuntu okufanele sigcinwe.
"... Kungenxa yokuthi ubugebengu obedlula bonke bekolonialism mhlawumbe bekungekhona ukukhohliswa ngamabomu komlando wethu, inkohliso uDiop alwela ukuyilungisa, kepha, njengoba uJohn Henrik ebonisa," ukwenziwa kwamakoloni isithombe kaNkulunkulu "…Okuphakanyiswa lapha, nokho, ukuthi lesi sithombe besiyingozi kakhulu, futhi siyaqhubeka nokucekela phansi kakhulu, kunenganekwane yokulandisa komlando wethu kanye nokunye ukuqanjwa kwe-Eurocentic nobandlululo ngoba lokho okufezwayo akukhona nje kuphela ukuqonda kwethu, kodwa umphefumulo wethu ”Ama mazama, Religion et Renaissance Africaine, Mambo Presses, 2010.
Ukuhlaselwa kwezinkolo zase-Afrika kanye namasiko ase-Afrika kukhula ngenombolo futhi kwenziwa ngokuvulekile, ngokuthula nangonembeza omuhle.
Ekuguqukeni kwabo konke, abanye abapristi, abefundisi kanye nezinsizwa abaphuthelwa yithuba lokukhipha inyumbazane izinkolelo zalabo abangenalukholo, kulo mphakathi abagula kakhulu ngokwedlulela kwabo, okubonakala sengathi bazinikele kukho konke okuhle, ukuzimela kwabo kukaNkulunkulu! Lo Nkulunkulu uthi "uyingqayizivele futhi uyindalo yonke", kodwa nokho obonakala exhumene nohlanga oluthile namasiko.
Kulo phephandaba Usuku Lokuningi kaMeyi 8, 2009, umholi wezenkolo waphakamisa ukuthi abalandeli bezinkolo zase-Afrika, ayezohola nabo i-jihad noma impi yakhe yenkolo, babengamazi uNkulunkulu.
Lo mholi wenkolo akuyena yedwa. Alukho usuku oludlulayo lapho amaphephandaba, ezenkolo noma cha, engakhulumi ngokuxhashazwa kwalaba "benkolo yenkolo" yanamuhla, ababhekise ekungabekezelelani ngokwenkolo kweNkathi Ephakathi YaseYurophu, noma ngamakoloni ase-Arab naseYurophu emhlabeni, kunqubo yabo "yokuphucuka" kwabantu abanqotshiwe.
Ezindaweni zokukhulekela noma esigcawini somphakathi, imikhuba ibekwa isigcwagcwa ngazo zonke izindleko, futhi abalandeli bazo zonke izinkolelo bahlulelwa ngaphandle kwesikhunta sezinkolo “ezinamandla” zanamuhla, kanye nemicabango yabo eyingqayizivele, lapho izakhamizi zakithi kumele bagcina ngokuzivalela izingqondo zabo.
Ngabe kunesidingo sokukhumbula ukuthi abesilisa nabesifazane bokuqala "abathola" uNkulunkulu empeleni babengokhokho bethu; abamnyama base-Afrika. KwakuyiKemit yempucuko enkulu emnyama yaseGibhithe lasendulo, ebhala ngokwemvelo imibhalo engcwele emlandweni, cishe eminyakeni engama-2600 XNUMX ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu: isikhathi eside, isikhathi eside ngaphambi kokuvela kwezinkolo zaseJudeo. UmKristu namaSulumane. Iningi lemibono yalokhu okuthiwa yizinkolo ezivulweyo inomsuka wayo e-cosmogonies yase-Afrika.
Izinkulumo ezikhethwe ngokungemthetho njengamakholoniyalizimu njenge "animist and polytheist" ngokuyisisekelo, abantu base-Afrika bangaba "ngabangakholwa" abalahlekile ebumnyameni futhi bengenathemba! ". Uma kungezona iziqu zenyama noma izikhulu zikaDeveli, kuthiwe abafanele ubuntu. Njengasezinsukwini zakudala ezinhle zekoloni eliqondile, ezazithi ziletha, ngesiphambano noma ngocezu lwenkemba, inkemba, isikali noma isibhamu esandleni, umphefumulo oyigugu, owawungaphuthelwa abanye abantu abanqotshiwe nabanikwa amakoloni kusuka lapha nalapha kwenye indawo ukuba ngamadoda, noma ukuthola ukufinyelela kwimpucuko.
Abahedeni banjengezilwane, kumenyezelwe ngokungagunci esikhathini esingengakanani esedlule, umfundisi, ngesikhathi somshado esifundeni sase-Abidjan, owemukela, ngaphezu kwenqwaba yomhlambi wakhe izingelosi, kahle abanye abantu abanelungelo nje lokungawakholwa amanga akhe avuthayo. Bathukwa phakathi nosuku lwenjabulo eyabiwe kanye nesidlo sobuzalwane, laba bantu kwakudingeka bagwinye inyoka eyodwa futhi! Akungabazeki ukuthi ngenxa yemfundo futhi ngenxa yokukhathazeka ukungaphazamisi inkambo yomkhosi. Kuzo zonke izimo, ukuhlakanipha kuyancoma, ezimweni, ukuthi singaphenduli lapho kukhahlelwa imbongolo ...!
Futhi-ke, ngeke uzwe umkhulekeli oyedwa noma umdansi "wezangoma", ecela uNkulunkulu, iZulu noMhlaba, ubuhlakani nomoya wokhokho bakhe, ngokuthuka abanye abangahlanganyeli nezinkolelo zakhe. I-invective ayikaze ibe yimpikiswano!
KubuManichaeism babo obunamandla, ingabe abalandeli bezinkolo okuthiwa zembuliwe nezisemhlabeni wonke baswele impikiswano yokugomela imfundiso yabo yenkolo, lapho abanye belingana khona ngokwabo, ngaphandle kokubhekisela, ngokuzenzakalela, kunoma iyiphi impikiswano noma ifoyila. Ngabe abakhombisi ngaleyo ndlela imikhawulo yokukhuluma kwabo?
Ukusuka ekukhuleni ngomlomo kuya kodlame lwasemzimbeni, kunesinyathelo esisodwa kuphela, esithathwa ngokuthokozile, kule Republic of Côte D'Ivoire, uMthethosisekelo wethu othi nokho awuyona eyenkolo, nalapho uMshushisi evame ukukhohlwa ukuphakamisa umunwe omncane ukuvikela imigomo yentando yeningi yentando yeningi kanye nokulawulwa komthetho, lapho isizwe sifuna khona, nabo bonke ubunzima emhlabeni, ukuhlala phansi!
Kuthathwe yi-fanaticism futhi ngalo mbono noma lo muzwa wokuba nesizathu nelungelo, okunqoba imimoya ekhanyiselwe, amaproselithe ayo yonke imivimbo ayethula e-jihad noma ezimpini zawo, ngokumelene nazo zonke izinkolo nemikhuba yezenhlalo namasiko, abakwazi ukumela umehluko.
I alibi of lobugebengu noma okubi ubuthakathi fetishism livame ukusetshenziswa, ukuze bavune lezi ukweqisa ngaphansi kunalokho amasu kokusetshenziswa komhlaba, kungaba azomakwa kuleli hlobo ngiyibona hegemonic okuyisa futhi ezidudula ngokuthi izinkolo jikelele , ehlezi emphakathini wethu.
Ngaphandle kwethu konke ukuzimisela ukuvikela imikhuba yokuhlukumeza njengoba ubulobi obungazi futhi bayiqaphela ukuhlukumeza phakathi kwabantu, edolobheni njengasemaphandleni. Emphakathini wethu, ngobuthi, ukubulala kanye iziphonso ezingaqondakali ngingayeki muntu futhi akukho ekilasini, ukudala uhlobo sengqondo bexhashazwa at intando, okungaphezu imbulu othola amabhizinisi ezinemali kunazo zonke.
Ngakho-ke siyakubona ukulimala okuhambisana nemikhuba emibi; bakha izithiyo ezilimaza isiko lamasiko ethu, zifaka isandla ekulahlweni ngabantu abaningi noma belahlekelwe ukubekezelela kwabo, futhi babe izisulu ezilula zamaproselithe nabanye abaphikisi abazi noma abangaqulekile abasebenza kahle ngokuhlukunyezwa kwabantu abambalwa abayizigelekeqe.
Kodwa-ke, ingabe sinokusabela okungafanele okufanayo ngamasiko nezinkolo ezisibusayo, lapho amaphutha abo emaningi kangaka?
Ukuhle nokubi kuhlangene nomuntu, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinkolelo zakhe, futhi ubugebengu obungamanga bukhona yonke indawo, njengamanye amanyala amaningi.
Ngubani okhohliwe izingqinamba zikaRashman Rushdy ngamavesi kaSathane? Sithini nge-sharia? Sizothini ngokuthakathwa kwabakhulekeli lapho izimfuno eziningi zibukeka zifana nokuphanga lapho, njengoba sazi, ingokomoya lingahlangani kahle nemali.
Empilweni yansuku zonke, ukwephula ukwethenjwa okungakhulumi ngegama lalo, ukufuna sekuyinto yokukhohlisa kwangempela, kubantu izingqondo zabo ezivame ukufiphazwa ukukholwa kwabo okungaphezulu, kanye nesihe sabalingiswa abakhohlakele, abaziphatha kwabo kufanele kunengeke kakhulu wesakhamuzi uma kungenjalo ukuphonsela inselelo bonke labo abathi bamatasa kangako ngokusindiswa kwabantu abakanye nabo, noma abahola i-jihad noma izinkolo, "ukuhlanza" umphakathi ngokungaqondakali noma ngokuziphatha.
Kulokhu, sincamela, esikhundleni salokho, ukuvala amehlo ethu kula maphutha, noma kunalokho siwahlanganise, siwathathe njengobufakazi besimanjemanje, noma inqubo entsha yokusebenza, ekufuneni izindlela zomcebo, amandla nobukhulu. Umuntu uzothini ngesimo esibekelwe abesifazane ezinkolweni ezinkulu lapho abokugcina benqatshelwe emisebenzini yabapristi kanye nama-imans?
Ngakolunye uhlangothi, njengoba mhlawumbe kudinga izinqumo ezinesibindi kohlangothi lweziphathimandla zomphakathi, ukubheka lezi zigameko zobuhlongandlebe ekuphathweni okuphelele kodaba lokuphepha kwezakhamizi, kufanele sikulahle ukuxega noma ukungabi nandaba. okukhombisa ukuthi babheke ukweqisa kokuguqula abantu okungalawulwa kwabaKhuseli Besikhathi Sethu, nakho kuyingozi.
Amaqiniso afana nezimpawu zomlando. Futhi, ngeshwa, sisesigabeni somlando wethu lapho, lapho sesiqede ukumelana okuyinhloko sabeka zonke izinsimbi zemibono, zesikhungo nezobuchwepheshe zohlelo lwakhe lokubusa, i-colonizer, i-Europe noma i-Arabhu, ingahle iwele izindlela. izingalo, ukubona ukuthi, phambi kwamehlo akhe, inqubo ukuthi waqala emakhulwini eminyaka ngaphambili, zenzeka, ukuze kuphothulwe ne amakoloni ngokwabo, abaye baba abadlali abazimisele kakhudlwana futhi ngempumelelo amakoloni abo, manje ngejubane layo ukuhamba ngomkhumbi.
Namuhla akuseyena omhlophe ophethe isibani, ngabantu base-Afrika abayithatha futhi bafaka umlilo ezintweni ezingcwele zikayise nomama.
Imibiko ye- “Jour Plus” kaMeyi 5 no-8, 2009 ayibiki yini ukuthi umholi wezenkolo ushisa “imithambo” ezindaweni zomphakathi ezindaweni ezise-Abidjan?
Lezi zigcawu zivuka kithi, inkumbulo yezikhathi ezimnyama zokwanda kwenkolo yamaSulumane nobuKristu e-Afrika noma eMelika. Inkolo ibilokhu, futhi isalokhu, ingenye yezinjini zokunqotshwa kwamakoloni.
Umbhalo ovela kuBull of Pope Nicholas V, 8 uJanuwari 1454 ovusa iminyaka emnyama yokukhula kwamaKristu e-Afrika.
"Kudala, ngezincwadi ezedlule, sasivumela iNkosi u-Alfonso, phakathi kokunye, ubuhlakani obugcwele ukuhlasela, ukunqoba, ukunqoba, ukunciphisa futhi athumele zonke Saracens (ie bangamaNigro), amaqaba ayephana nezinye zitha zikaKristu kungakhathaliseki ukuthi bakuphi, nge yabo imibuso, duchies, principalities, amasimu, izakhiwo, nezinqe ingenakunyakaziswa yonke impahla aphethwe kubo, balidla, ukunciphisa abantu babo ekusebenziseni ubugqila obungapheli (...) ukuzibophezela kubo nokwenza izinsiza ezisetshenziswayo nezisebenzisayo lezi ezibizwa ngokuthi imibuso, ama-duchies, amazwe, izinhloko, izakhiwo, izimpahla kanye nempahla yalaba bantu abangakholwa iSaracens (ama-negroes) namaqaba (...)
Abaningi baseGuinea nabanye abamnyama ababethunjiwe, abanye baphinde bahlanganyele ngempahla engavinjelwe noma bathengwe ngaphansi kwesinye isivumelwano esivamile sokuthengisa, bathunyelwa eMibusweni okuthiwa yiMbuso.
I-paradigm izuzwe ku-umlando ka-Hegel ongafaki i-Afrika emlandweni kanye nezinkolelo ze-anthropological zikaGobineau eziphika iNegro noma iyiphi indima ebalulekile ekuguqukeni kwesintu ngenxa yokwehla okusolwayo "kohlanga" lwakhe zisasebenza emazweni aseNtshonalanga, kodwa iqiniso elisha ukuthi le ndlela yokubukeka ibonakala iwine umcabango wesimanje wase-Afrika namuhla, ngokungangabazeki ngokusebenzisa izikole nenkulumo-ze.
Ngakho-ke siyaqaphela ukuthi abantu abaningi base-Ivory Coast bagcine ngokuhlanganisa lobu bandlululo futhi bathola imibono ngabase-Afrika. Sigcina sesinesimo esingajwayelekile, okusho ukuthi uhlobo oluthile lokucwasana ngokwakho.
Esikhathini esilandelayo, sifuna ukunaka ukugqama kokuguqulwa kwezenkolo futhi ikakhulukazi imiphumela yaso eyingozi yokuthula komphakathi.
Kodwa nakakhulu, sifuna ukuvusa lobudlova, ukuze sixwayise umphakathi ngokubhekisisa kwesimo samasiko wezwe kanye nezigxobo ezihilelekile. Ukuthi waba ngokuyisisekelo ukhuluma ngani lapha ukubhujiswa base-Afrika by idiologies angaphandle ukuthi zenzeka buthule emthunzini izinkolo ngaphansi kwebhaxa search ukuze kusindiswe abantu belwa ubuthakathi nemikhuba ihlongandlebe sonke bekhala ngokusetshenziswa kwamandla.
Ukuhlukahluka kwezenkolo njengokuhlukahluka kwamasiko kuhle kumuntu okufanele alondolozwe. Futhi asinalo ilungelo ngaphansi kwanoma yisiphi isisusa sokuvumela amasiko ethu, anendawo yawo egcwele emhlabeni, ahlaziywe.
I-YAO N'Guetta ne-TRAORE Adama
Ingcaphuno encwajaneni ye-3 eyanyatheliswa yinhlangano ye-Kemetmaat kaDisemba 2011.
UNkulunkulu ukhona ngokwesayensi (iVidiyo)
I-Aloe vera, umthombo wobusha bamaMaya